Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey mid ka mid ah 24-kii saac ee ugu dhimashada | KWIT
Warbixinnada Caafimaadka Degmada Siouxland waxay soo weriyeen in saddex dhimasho oo dheeri ah ay ugu wacan yihiin dhibaatooyin la xiriira COVID-19 oo ka jira Woodbury County, 25 oo dhammaantood ah. Waxaa jiray 55 kiis oo cusub oo ka badan 2,400.
Degmada Dakota ayaa ka warbixisay 3 xaaladood oo cusub oo wadar ahaan gaaraya 1,600 kiis. Dhimashada ayaa joogtay 15 qof.
Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa sheegay in gobolka uu balaarin doono barnaamijka TestIowa sidaa darteed qofkasta oo raba in lagu tijaabiyo COVID-19 uu awoodo.
Illaa iyo hada, barnaamijku wuxuu mudnaanta siiyay shaqaalaha daruuriga ah, laakiin Reynolds wuxuu leeyahay helitaanka tijaabada ballaaran waxay ka caawin doontaa ganacsiyada badan go'aansashada goorta dib loo furayo.
Qof kasta oo raba in la baaro waa inuu ku buuxiyaa foomka qiimaynta ee TestIowa.com.
Hada waxaa jira sideed goobood oo Imtixaan Iowa ah oo gobolka oo dhan ah; oo ay ku jiraan Western Iowa Tech Community oo ku yaal kulliyadda ku taal magaalada Sioux City.
Guddoomiyaha Gobolka Nebraska Pete Ricketts ayaa qorsheynaya in la yareeyo xannibaadaha ka imanaya isu imaatinnada dadweynaha inta badan gobolka 1-da Juun.
Tallaabadan kuma jiraan Degmada Dakota, oo ah goob uu saameeyey faafitaan ka dillaacay warshaddii Tyson Foods ee Dakota City.
Nebraska ayaa u oggolaan doonta baararka, xeryaha xayawaanka, tiyaatarada filimada iyo barkadaha dabbaasha inay dib u furmaan oo u oggolaadaan riwaayadaha iyo xaraashyada yaryar inay dib u bilaabaan.
Ricketts wuxuu sheegayaa inuu isku dayayo inuu isku dheelitiro inta udhaxeysa caafimaadka bulshada iyo baahida loo qabo in dib ugu laabto noloshii caadiga ahayd madaama dadku ay xasilloon yihiin.
By Halima Osman • May 19, 2020
By Halima Osman • May 18, 2020